Mofonaina anio Talata 17 Oktobra 2017. Lioka 18: 1-8 | Ma vie en abondance
Posté le 17 octobre 2017 par abondance dans spiritualité
Ny hoe : mahery vavaka dia madika hoe misy fiantraikany, mahazo valiny.
Fepetra roa no hahatongavana amin’izany.
1) RAHA MAHARITRA MIANDRY VALIM-BAVAKA (1-5)
Hoy ilay mpitondratena hoe: « omeo rariny aho amin’ilay manana ady amiko ».
Tamin’ny voalohany dia tsy nanaiky ilay mpanapaka. Nivezivezy matetika tao amin’ny mpanapaka izy fa tsy nanaiky ihany ilay mpanapaka. Rehefa naharitra sy nitohy nangataka anefa izy, azony ny rariny nangatahiny.
Toy izany koa isika raha maharitra miandry valim-bavaka. Mampahatsiaro antsika ny nataon’i Jesoa tamin’ilay vehivavy kananita izany (Jereo Matio 15:21-28). Andriamanitra mihaino vavaka Izy ka manome rariny. Araka ny tenin’ny mpanao Salamo hoe: » Ry mpihaino vavaka ô ». Andriamanitra manana ny fotoanany Izy ka ilaina ny mi-insiste (mikiry) rehefa mangataka. Tahaka ny nataon’i Jakoba ao amin’ny Genesisy 32 : 27 hoe: »Tsy havelako handeha Ianao, raha tsy tahinao aho ».
Ry havana, Nisy zavatra nirinao efa ela be ka nangatahinao tamin’ny Tompo ve? Mety efa kivy ianao ka efa niteny hoe: tsy ho azoko intsony angamba iny. Tsy omen’ny Tompo ahy angamba izany ka tsy hangataka intsony aho.
Ambaran’ny Soratra Masina aminao anio fa efa akaiky (omeny faingana) ny valim-bavaka. Faharetana no takin’ny Tompo amintsikta fa efa ao ilay valim-bavaka. Mahareta miandry valim-bavaka ary mivavaha tsy tapaka. Tsarovy fa tsy ela mamaly vavaka akory Andriamanitra fa manomana ny tsara indrindra ho antsika izy. Faharetana fotsiny no takiny amintsika fa ho tsara lavitra noho izay nangatahinao aza no omeny eo.
Fampanantenana indray no omen’i Jesoa Kristy antsika ry havana, fa omeny antsika izay ilaintsika raha maharitra miandry valim-bavaka isika.
Koa manomboka anio, angataho indray ilay zavatra tena nirinao nefa tsy mbola azonao ka nahakivy anao. Ary tohizo hatrany ny fangatahana fa tsy maintsy azonao io. Jesoa mihitsy no mampanantena eto hoe: » Lazaiko aminao fa omeny rariny faingana ianao »
2) RAHA MITERAKA FINOANA IZANY (6-8)
Nanazava ny toetran’Andriamanitra ilay mpamaly vavaka i Jesoa Kristy eto. Tena mamaly vavaka Izy, haingana ny valim-bavaka, ara-potoana ny valim-bavaka. Matetika anefa no toa ny ara-nofo ihany no hitantsika amin’izay valim-bavaka izay. Fa mitsinjo mandrakariva ny ara-panahy Jesoa Kristy amin’ny valim-bavaka. « Kanefa raha avy ny zanak’olona, moa hahita finoana ety ambonin’ny tany va Izy? » Finoana no takin’ny Tompo:
- Finoana fa marina amin’ny Teniny Andriamanitra ka mamaly vavaka sy manome izay rehetra angatahintsika ary manome mihoatra aza.
- Miteraka finoana: ny valim-bavaka azontsika dia tokony hiteraka finoana. Amin’izao andro farany izao, manjaka ny ratsy, maro ny olona miala amin’i Jesoa Kristy, maro ny olona variana amin’izao fiainana eto ambonin’ny tany izao. Toa efa omen’Andriamanitra mantsy izay ilaina eto an-tany ka variana sy miha miala amin’Andriamanitra indray. Fa ny tena vavolombelona mariny tsy toy izany. Ny fahatsapany fa manome izay ilainy eto an-tany Andriamanitra, dia miteraka finoana vaovao sy faniriana lalina hanakaiky kokoa an’Andriamanitra izany. Mahatonga azy hikatsaka ilay fiainana tena izy dia ny fiainana any an-danitra izany. Tahaka ilay lazain’i Paoly izany hoe: « Katsaho ny zavatra any ambony, any amin’ny itoeran’i Kristy. Saino ny zavatra any ambony ». Io no valim-bavaka tena izy tokony hokatsahintsika.
Mahery vavaka ny vavolombelona marina raha maharitra miandry valim-bavaka. Koa matokia ianao fa tsy maintsy azonao io zavatra nirinao fatratra io. Kanefa aoka hiteraka finoana velona izany. Fa natao amelomana ny finoantsika ny valim-bavaka azontsika.